पुस, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने धेरै नयाँ मोडलहरु आफ्नो करियर बनाउन यसक्षेत्रमा लागेका धेरै भेटिन्छन । तर करियरको लागि यसक्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपनि यसक्षेत्रमा भविष्य छैन भन्दै मोडलिङ् क्षेत्रको सपना पनि देख्न छाडिसकेका छन् धेरैले । तर यति बेला मोडलिङ क्षेत्र छोड्नेको संख्या भन्दा पनि भित्रिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । यस्तै भिडकी एकजना मोडल यस क्षेत्रमा करियर खोज्दै भित्रिएकी छन् । ती मोडल हुन् ‘मनिका बुढाथोकी ।
पछिल्लो समय के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ? अहिले स्ष्टेज प्रोग्राम तथा ¥याम्पमा ।
नृत्य अभियनबाहेक अन्य रुचिको क्षेत्र ? लेखन र अध्ययनमा रुचि छ । कहिलेकाही गुनगुनाउछु पनि ।
लेखनमा कस्तो विषयले प्राथमिकता पाउँछन् ? रोमान्टिक विषयमा लेख्नै सक्दिन । ट्राजेडीका विषयमा लेख्न मन लाग्छ । प्रेममा धोका पाएर ट्राजेडी फुरेको हो ? त्यस्तो होइन, प्रेम गर्ने असल मान्छे भेटेकै छैन । सानै छु वेला हुदै छ होला । उसोभए अहिले सिङ्गल ? एकदम, कम्प्लिट सिङ्गल छु । सामाजिक सञ्जाल कुन, कुन कत्तिको चलाउनुहुन्छ ? फेसबुक , टुईटर, प्राय चलाउछु ।
साथी बन्ने प्रस्ताव कतिको आउँछ ? धेरै आउछन् ।
हाम्रो समाजमा ‍¥याम्प मोडलको खासै प्रशंशा गर्ने गरेको सुनिदैंन नि ? हो । यस्तो देख्दा केही खल्लो पनि लाग्छ । तर, यो सबै हेर्ने नजरमा भर पर्छ । विस्तारै सुधार हुँदैं गएको जस्तो लाग्छ ।
के चढ्नु हुन्छ ? गाडी, स्कुटी वा सार्वजानिक सवारी ? धेरैजसो सार्वजानिक सवारीमा यात्रा गर्छु ।
तपाई कतै बजारमा जाँदा सबैभन्दा मनपर्ने लुगा तपाईको कुन हुन्छ ? वन पिस र साडी ।
अन्ततः तपाईलाई १० बर्षपछि कहाँ कस्तो अवस्थामा देख्न पाइने छ ? एउटा राम्रो कलाकार भएको यही नेपाली कला क्षेत्रमै ।
केही भन्न चाहनु हुन्छ दर्शक तथा पाठकलाई ? म मेहनत गर्छु, मैले गरेको हरेक कामहरुलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला, त्यही अनुसार अघि बढ्छु ।